Ngwa ise kachasị mma inye aka n'ụbọchị ndị Nna | Gam akporosis
Alexis Martinez | | Ngwaọrụ ndị ọzọ
Ma ị maghị ihe ị ga-enye maka ụbọchị Nna? Dịka ị ga-ahụ na blọọgụ ụbọchị niile anyị na-enye gị echiche nke ihe ị ga-enye maka ụbọchị pụrụ iche. Ugbu a, ọ bụ n'aka na-ebu a ndu nke ihe kacha mma 5 kacha mma inyefe.
O doro anya na dịka nwatakịrị, ị gaghị akwụsị iche echiche banyere ihe ị ga-enye ma gbanahụ onyinye ndị a ma ama dịka akwụkwọ, CD, uwe elu, agbatị na ogologo wdg. Ọfọn, site na blọọgụ anyị nwere teknụzụ nke ọma, mana n'ezie ntuziaka na-esote bụ maka ya, yabụ na-enweghị oge ọzọ anyị ga-ahụ ngwaọrụ kachasị mma inye.
1 Elele anya
2 Igwefoto gam akporo
4 Ike Bank
5 Selfie osisi
O doro anya na afọ a ga-afọ nke smart eseNaanị ị kwesịrị ile anya na akụkọ anyị bipụtara n'oge na-adịbeghị anya metụtara ụdị ngwaọrụ a. N'ime ụwa a anyị na-achọta ụzọ dị iche iche ga-esi kwekọọ n'ụdị na ụmụ bebi dị iche iche. Anyị nwere ike ịchọta ha site na ha nwere igbe nwere akụkụ anọOlee otú Samsung Galaxy Gear Ndụ ma ọ bụ LG Watch ma ọ bụ na gburugburu igbedị ka ya Moto 360, na ihe niile na ọnụahịa n'okpuru € 200.
Igwefoto gam akporo
Nna gị ọ na-enwekarị foto na netwọkụ mmekọrịta? You bụ otu n'ime ndị nne na nna ahụ na-achọ foto kacha mma? Mgbe ahụ ihe ịchọrọ bụ ezigbo igwefoto gam akporo iji see foto ma kesaa ya na netwọkụ mmekọrịta gị ma ọ bụ naanị kesaa ha ozugbo site na e-mail ma ọ bụ ọrụ ozi ozigbo. Nwere ike ịhọrọ maka Samsung Galaxy Igwefoto 2 nwere ọnụ ahịa ihe dị ka € 400 ma ọ bụ Nikon Coolpix s800c, dị ọnụ ala karịa.
Obi abụọ adịghị ya na nhọrọ kachasị mma iji mee ka telivishọn bụrụ telivishọn mara mma na nna gị nwere ike ịhụ ọdịnaya niile nke ama ya ma ọ bụ mbadamba ya ozugbo na telivishọn. Ziga ọdịnaya niile nke nna gị kachasị amasị ya na ekwentị ma ọ bụ mbadamba ya ozugbo na TV. Lelee foto, vidiyo, vidiyo YouTube, kpọọ na nnukwu ihuenyo ebe njikwa bụ ekwentị, kekọrịta ihuenyo site na kọmputa na TV wee gaa n'ihu na-arụ ọrụ na ya na-enweghị atụgharị gam akporo ngwaọrụ, lelee ihe nkiri na usoro zụrụ site na Google Play na a ogologo wdg bụ ụfọdụ ohere enwere ike iji ngwaọrụ a wee mee naanị € 35.
Ọ bụrụ na nna gị bụ otu n'ime ndị na-na mobile si n'elu na ala maka onwe ma ọ bụ ọrụ ihe, n'ezie ọ na-eme mkpesa na batrị ya ama uzo ngwa ngwa, mgbe ahụ, ¿ Kedu ihe ị na-eche ịzụta batrị dị na mpụga ? Enwere ikike karịa, dabere na mAh nke ngwaọrụ anyị na akpa anyị anyị ga-adabere na otu ma ọ bụ nke ọzọ.
Anyị ahapụwo ya maka njedebe, nke ghọrọ otu n'ime ngwaọrụ nke afọ, ngwaọrụ anyị na-ahụ n'ebe kachasị njem nleta nke obodo ọ bụla na nke na-eso anyị na njem anyị. Na ma ọ bụ na-enweghị Bluethooth, mkpịsị aka onwe onye dị na ejiji, enweghị obi abụọ banyere nke a, yabụ na ọ gaghị efu na ogo a nke Ngwa 5 kacha mma iji nye aka na ụbọchị Nna. Ngwaahịa dị mma iji soro nna gị na ndị ị hụrụ n'anya see foto ma mee ka ụbọchị a pụrụ iche ghara ịnwụ anwụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwaọrụ ndị ọzọ » Ngwaọrụ 5 kacha mma inye onyinye n'ụbọchị Nna
Egwuregwu vidio 5 inyefe n'ụbọchị nna